Nusaybin-Habur မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းစီမံကိန်းစတင် | RayHaber | raillynews
18 / 01 / 2016 ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
အဆိုပါ PKK အကြမ်းဖက်စီမံကိန်းဆက်လက်ညိရန်ကြိုးစားခဲ့ရှိရာအရှေ့တောင် Anatolia အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု: Nusaybin-Habr မြန်နှုန်းမီးရထားစီမံကိန်းဘဝအပေါ်လွန်။ အစိုးရကအသက်တာ၌တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားဆက်လက်ထားတဲ့ Nusaybin မှသက်တမ်းတိုးရေးအတွက် Habur မြန်နှုန်းရထားလမ်းစီမံကိန်းအားဖြုန်းပါလိမ့်မယ်သမျှသောခြိမ်းခြောက်မှုများYüksekova'yaလေဆိပ်နေသော်လည်း။ အဆိုပါ5သန်းခုနှစ်တွင်မီးရထားလမ်း Cizre နှင့် Silopi ထံမှလွန်သွားပါလိမ့်မယ်မြန်နှုန်းမှကုန်တင်ထတန်ချိန်စီမံကိန်းနှင့်အတူလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ တူရကီမှုနှုန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့မီးရှို့ဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု၏ယခုကာလ၌အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းကို PKK မလြော့နေဆဲဖြစ်သည်။
အခြိနျအကနျ့အကျွန်ုပ်သည် OFF မှာနေဖို့
မှုတိုးပွားလာအကြမ်းဖက်ဖြစ်ရပ်များ Habur နယ်စပ်ရေးရာဂိတ်မှခဏပိတ်ထားဆက်လက်, အီရတ်မှတင်ပို့တဲ့သူလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ၏သားကောင်ခဲ့သည်ဇူလိုင်လပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတည်းက, တံခါးကိုမကြာမီတာဝန်ထမ်းဆောင်မတိုင်မီနောက်တဖန်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တူရကီနဲ့အီရတ်အကြားကုန်သွယ်မှုနီးပါး Habur, လူများအဘို့ကြီးသောအရေးပါမှု၏တစ်ခုတည်းသောအချက်။ အချိန်ကနေ ပို. ပို. ဖြစ်လာအချိန် Habur သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုမဖယ်ရှားနိုင်, ဒေသတွင်းသစ်စီမံကိန်းအစီအစဉ်မှဆောင်ခဲ့ကြ၏။
Nusaybin SPEED ရထားလမ်း
သူ Habur ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်သည့်တူရကီမြန်နှုန်းရထားလမ်းစီမံကိန်းအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုမှာ။ စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်များအတွက်ဒေသဆိုင်ရာစီမံကိန်း, ထိုအကြမ်းဖက်သမားတွေကသန့်ရှင်းရေးစစ်ဆင်ရေးကို ယူ. , Nusaybin မြို့ကနေစတင်ပါလိမ့်မယ်။ Nusaybin အတွက်ဆီးရီးယားသို့ဝငျမြားနှငျ့ထိုအရပ်မှတစ်ဦးပွိုင့်ပြီးနောက်လိုင်းသုံးစွဲဖို့တည်ဆဲမီးရထားကို disable အီရတ်ကိုသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
NOW ကအဆိုပါ Cizre နှင့် Silopi ကြောင်း
Mardin Nusaybin-Habr-မြန်နှုန်းမီးရထားစီမံကိန်းနှင့်အတူကိုပြင်ဆင် Sirnak လမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုလိုင်းဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ လိုင်းကုန်ကျစရိတ်နှုန်းယခုနှစ် 2018 2.2 ဘီလီယံအထိဖြစ်ရလိမ့်မည်သည်အထိအကောင်အထည်ဖော်မှုစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ စီမံကိန်း Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur လမ်းကြောင်းအတွက်ရှေ့ဆက်ဖို့, အီရတ်နှင့်တူရကီအကြားတိုက်ရိုက်ရထားလမ်းကူးသေချာစေရန်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ လိုင်းအရှည်နှင့် Clock Speed ​​ကို dual-အညီတစ်နာရီကီလိုမီတာနှုန်းနိုင်စွမ်း 134 160 ကီလိုမီတာကြောင့်လျှပ်စစ်နှင့်ရထားလမ်းအချက်ပြပါလိမ့်မည်။ စီမံကိန်းပြင်ဆင်မှုအလုပ်စဉ်တွင်ပင်ကုန်တင်၏5တန်ချိန်သန်းအထိပို့ဆောင်ရည်ရွယ်သောသူတို့အား။
တင်ဒါအသိပေးချက် - Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur မီးရထားစီမံကိန်းစီမံကိန်း
TCDD Nusaybin - Cizre-Silopi - Habur မီးရထားစီမံကိန်း - လေ့လာခြင်း၊ ဒီဇိုင်းနှင့်အကြံပေးခြင်း…
တင်ဒါအသိပေးချက် - Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur မီးရထားစီမံကိန်းüt
TCDD Nusaybin - Cizre - Silopi - Habur မီးရထားစီမံကိန်းတိုင်းတာခြင်း၊ ဒီဇိုင်း၊ အင်ဂျင်နီယာ…
TCDD Nusaybin - Cizre - Silopi - Habur မီးရထားစီမံကိန်း Et
TCDD Nusaybin - Cizre - Silopi - Habur မီးရထားစီမံကိန်းလေ့လာရေး၊ ဒီဇိုင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာ
လာသောအခါဤမျှလောက်များစွာသောအရှေ့တိုင်းမန်နေဂျာ TCDD, ဒီအံ့သြမဖြစ်သင့်!